Madaafiic khasaare gaystay oo maanta ku dhacay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. – Radio Daljir
Madaafiic khasaare gaystay oo maanta ku dhacay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Maajo 3, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, May, 03 – Dab qasaaro hantiyadeed iyo mid nafeed gaystay ayaa ka kacay Suuqa bakaaraha ee Magalada Muqdishoka dib markii uu ku habsadeen madaafiic laga soo ganay dhinaca dawladda sida uu Daljir u sheegay guddoomiyaha suuqaasi Cali Dheere.
Waxa uu sheegay guddoomiyaha gudiga ganacsatadu in madaafiicda ay soo tureen ciidamada Amisom ee jooga magaalada wasaaraddii hore ee Gaashaandhigga oo dhawaan ay la wareegeen ciidamadaasi, ayna bakhaarro waa wayn oo raashinka lagu kaydiyo, kuwaas oo qaar kkod basbeeley qaarna uu damiyyey roob qabtay suuqa wax yar ka dib dhacdaasi.
Warar hor dhaca ayaa sheegaya in ilaa sedex qof ay ku dhinteen goobtaasi ayna dad kale ku dhaawacameen, uuna jiro khasaare hantiyeed oo ballaaran.
waxaan ilaa imika jirin cid ka hadashay dhanka dawlada federaalka iyo saraakiisha amisom o iyaga lagu edeynayo in ay ka danbeyeen weraradaasi qasaaraha ka dhasheen.
Maxamed Cabdi Xuseen ?Kuriya?
Burcad badeed Somali ah oo diiday inay siidaayaan markab ay madax furasho ka qaateen oo la laayey.
Baahin: Isniin, May 02, Weriye C/raxmaan Xuseen Gaardi ~ Daljir ~ Garowe. Dagaalkii Garbahaarey ee u dhexeeyey Al-shabaab & ciidanka dawlada federaalka oo istaagay; khasaare lixaad leh oo ka dhashay; Isaaq Mursal, xog-hayaha gaashaandhiga ee Ahlu-sunna ayaan waraysanay … Hoggaamiyihii ururka Al-qaacida Sh. Usaama Bin Laden oo la dilay; warbixin ku saabsan sooyaalka taariikheed ee Sh. Usaaama … Dawlada federaalka oo faragelin siyaasadeed ka wada gobollada Puntland; Garaad C/llahi Cali Ciid oo hoga-tusaaleeyey sooyaalka Puntland … Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Puntland oo tababar ku saabsan xiriirka lamaanaha uu uga furmay Garowe …